राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलज्यू भनेपछि… « News24 : Premium News Channel
राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलज्यू भनेपछि…
काठमाडौं । आइतबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हलमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाही अड्किँदै अड्किँदै बोलिन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अड्किँदै सम्बोधन गरेकी उनले नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल भनेपछि हलभित्र हाँसो चल्यो ।
माओवादीको महाधिवेशनमा अतिथी बनेर आएका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि कुन्तीतर्फ पुलुक्क हेर्दै हाँसे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि उनीतिर हेर्दै खुबै हाँसे । कार्यक्रममा उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरु पनि हाँसेका थिए ।
उनले भनिन्, ‘आज यहाँका युवाहरु कहाँ छन् ? सय डिग्रीको तापक्रममा खाँडीमा पसिना सिञ्चित गरिरहेका छन् । अब, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर देश विकास गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले देश निर्माणमा सबै दल एकजुट होऔँ ।’